Ihe 3 ị ga-ewere ee ma ọ bụ ee na njem | Njem Absolut
Njem zuru oke | 13/12/2021 11:59 | Emelitere ka 15/12/2021 12:04 | ndị ọzọ
Ugbu a na ọnọdụ kpatara mbata nke ọrịa na-efe efe yiri ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-alaghachi na nkịtịỌtụtụ n'ime anyị na-akwadebe onwe anyị maka, na ezumike na-esote, iji mee njem nke anyị nwere ike ịkwụsị site na oke nrụgide na nchekasị. Iji mee nke a, anyị ga-eji nlezianya hazie ụzọ njem nlegharị anya ga-eso nke iji hụ na ngafe anyị gafere ebe na njem nlegharị anya Nke kacha mkpa n'ime ebe anyị na-aga.
1 Ihe atọ ị ga-ebu na akpa gị
1.1 Kwadebe nke ọma uwe ị ga-eyi
1.2 Echefula ngwá electronic gị
1.3 Jiri ngwaahịa ịdị ọcha kwado ịdị ọcha gị
Ihe atọ ị ga-ebu na akpa gị
Akụkụ ọzọ anyị kwesịrị iburu n'uche bụ ihe ndị anyị na-aghaghị iburu maka njem anyị. Enwere ọtụtụ nkwadebe na, ọtụtụ oge, anyị na-emecha riri nne na mbukota ezighi ezi na n'oge ikpeazụ. Iji zere ụdị ọnọdụ a, anyị ga-edepụta gị n'okpuru ihe 3 ị ga-eji na-aga njem.
Kwadebe nke ọma uwe ị ga-eyi
Ọ bụ ezie na o doro anya, anyị aghaghị inwe Uwe kwesịrị ekwesị iji gaa nke ọma dị ka o kwere mee na njem nlegharị anya anyị. E wezụga uwe ime nke anyị ga-eyi, anyị ga-emerịrị nhọrọ anyị na ihu igwe anyị ga-ahụ ebe ahụ: ọ bụrụ na ichere obere okpomọkụ, kwadebe uwe aka, okpu, ịchafụ na sweatshirts; n'ụzọ megidere, ma ọ bụrụ na ị na-eche na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'oge njem gị, jiri aka gị kee onwe gị nịịka, uwe elu na t-shirts uwe leta. Ọ bụrụ na enwere osimiri dị nso, echefula uwe igwu mmiri gị!
Iji kwado nhọrọ nke uwe ị ga-ebu n'ime akpa gị, anyị na-akwado ka ị họrọ uwe tent na ị nwere ike iji ma dị iche iche n'ime ụbọchị nke ọnụnọ gị. Ọ bụrụ na ọnụnọ ahụ dị ogologo, gaa nke ọma na T-shirts, uwe ogologo ọkpa na akpụkpọ ụkwụ dị iche iche.
Echefula ngwá electronic gị
Ọganihu teknụzụ nke pụtara n'afọ ndị na-adịbeghị anya ewepụtala ọtụtụ ngwaọrụ eletrọnịkị bara uru nke ukwuu. Na-agafe na smartphone na chaja ya, anyị aghaghị ijide n'aka na anyị na-ebu igwefoto, laptọọpụ anyị na batrị dị n'èzí nke anyị ga-eji chajịa ngwaọrụ anyị ma ọ bụrụ na batrị agwụ.
Mgbe ị na-ebugharị ngwaọrụ ndị a, ọ ga-adị mkpa kpokọta ha dị ka o kwere mee iji gbochie ha imebi n'oge njem. Iji mee nke a, gbalịa iburu ha n'ime akpa gị ma ọ bụ n'akpa azụ dị iche iji kwe nkwa nchebe ha. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ibufe ya n'akpa gị, jide n'aka na itinye ha n'ime ya mpaghara akpa etiti.
Jiri ngwaahịa ịdị ọcha kwado ịdị ọcha gị
O yikarịrị, mgbe ị rutere n'ebe njem nlegharị anya gị, ị ga-anọ na a hotel nke na-enye ndị ahịa ya ụdị niile ihicha ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma ihe ga-abụ ngwaọrụ ndị a nke ebe obibi ahụ ga-agụnye, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmara mana ụfọdụ ihe na-efu efu, ị ga-ewererịrị Akpa akpa na akpa dị mkpa: brọsh eze, deodorant, moisturizer, ihicha, ncha ... na na.
Ebe ọ bụ na ha bụ ngwaahịa na-ekwe nkwa na ịdị ọcha site n'akụkụ dị iche iche nke ahụ anyị, anyị aghaghị ijide n'aka na ha zuru oke echekwara nke ọma iji gbochie ha ime unyi. N'ihe banyere ite ngwaahịa, ọ gaghị adị mkpa, mana ị nwere ike ibufe ha na akpa dị iche iche iji gbochie ha ijide. unyi na mmiri.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị akụkụ nke akpa ahụ, otu n'ime ngwaahịa ndị ị kwesịrị ịdị jụụ karị mgbe ị na-aga njem dị mma. mkpuchi ụlọ Na nke chebe akụ gị pụọ n'ohi na ihe omume ndị ọzọ enwere ike n'oge ezumike gị. Cheta ileba anya n'echiche gbasara onyinye amụma dị, na-atụnyere ọnụahịa na mkpuchi ịhọrọ, yabụ, nke kacha dabara maka mkpa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ihe atọ ị ga-ewere ee ma ọ bụ ee na njem
Ịga na Sri Lanka: ndị njem nlegharị anya Spanish chọrọ Visa?